ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Techin
Techin ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။
Techin ကို 2002 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤနယ်ပယ်တွင် နှစ်ပေါင်း 20 ကျော်ကြာအောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ အံ့သြဖွယ်ကောင်းပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်က ဥရောပတွင် ကြက်ဆူပင်နှင့် ဘီးလုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်ရောင်းအား သန်း 100 ကျော်ရှိသည်။ယခုနှစ်တွင်၊ Techincastor ထံမှ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ အသံကြားနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ရည်ရွယ်ထားသောကြောင့် ဤမွမ်းမံထားသောဆိုက်အတွက် သင်တွေ့နိုင်သော အကြောင်းရင်းဖြစ်သည့် အွန်လိုင်းအရောင်းဌာနကို တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်တွင် နိုင်ငံတကာတွင် စက်ရုံများနှင့် လက်ကားရောင်းချသူများလည်း အများအပြား ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။သို့သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက် စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအဆင့်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် ပိတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။အမှန်တော့၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကြက်ဆူနှင့်ဘီးများ၏ ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ပြီး၊ Techin သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်နည်းပညာဖြင့် ဤဈေးကွက်ထဲသို့ သွေးချိုများ ထိုးသွင်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်သည့် ထုတ်ကုန်များအပြင် Techin သည် အရွယ်အစားအားလုံးနှင့် အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံအသုံးပြုမှုတို့ကို လွှမ်းခြုံကာ တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြီးပြည့်စုံသော ကြက်ဆူပင် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း Techin သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် ကြက်ဆူပင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး တရုတ်၊ ဥရောပ၊ အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများ အပါအဝင် ကြက်ဆူထုတ်ကုန်များ၏ ဒေတာဘေ့စ်ကို တဖြည်းဖြည်း ဖန်တီးခဲ့သည်။ကြက်ဆူပင်ထုတ်ကုန်များ၏ လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် ဖြေရှင်းချက်များကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်နှင့် တိကျစွာရရှိရန် ကူညီပေးသည်။
စားသုံးသူများသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝမ်းနုတ်ဆေးနှင့် ထိုက်တန်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိစေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် "one stop"/one station ဟာ့ဒ်ဝဲဝယ်ယူခြင်းဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင်-
1. စျေးကွက်အပေါ် နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာပြီးနောက် ကုန်ကျစရိတ် အထိရောက်ဆုံး ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူသူများအား ပံ့ပိုးကူညီပါ။
2. သိုလှောင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်နှင့် ဖောက်သည်များအတွက် ပေးပို့ချိန်ကို တိုစေရန်အတွက် လက်ရှိဂိုဒေါင်၏ အားသာချက်ကို အသုံးချကာ လက်ရှိ ဂိုဒေါင်၏ အားသာချက်ကို အသုံးချကာ တွဲလုံးများနှင့် ဘီးများကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။
3. စျေးကွက်အချက်အလက်၊ ထုတ်လုပ်သူအသစ်များနှင့် ထုတ်ကုန်အသစ်များ၊ အရင်းအမြစ်အချက်အလက်အားလုံးကို သုံးစွဲသူများနှင့် မျှဝေပါ။
4. တီထွင်ဆန်းသစ်ထားသော ဒီဇိုင်းအသစ်၊ ဖောက်သည်များနှင့် ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ ထုတ်ကုန်များကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ကာ စျေးကွက်ကို အကာအကွယ်ပေးရန် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ပါ။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အင်တာနက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့သည်။နည်းပညာin သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အထူးကြက်ဆူရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို တီထွင်ခဲ့ပြီး တရုတ်၊ ဥရောပ၊ အမေရိကန်အပါအဝင် ကြက်ဆူပင်ထုတ်ကုန်များ၏ ဒေတာဘေ့စ်ကို တဖြည်းဖြည်းဖန်တီးခဲ့သည်။နှင့်အခြားသူများ.အနာဂတ်တွင်မျှော်လင့်ချက်၊ Techin ၏လုံ့လဝီရိယနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများပေါင်းစပ်ထားသည့်အင်တာနက်၏တိုးမြင့်လာသောအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအားကိုးပါ၊ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များအားကြက်ဆူပင်ထုတ်ကုန်များ၏လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ဖြေရှင်းချက်များကိုအမြန်နှင့်တိကျစွာရရှိရန်ကူညီသည်။